Mampianiana ny minisitry ny fizahantany voalohany i Sipra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mampianiana ny minisitry ny fizahantany voalohany i Sipra
Janoary 2, 2019
Ny nosy kely Mediteraneana any Sipra dia nanendry ny mpanatanteraka hotely teo aloha, Savvas Perdios, ho minisitry ny fizahan-tany voalohany tamin'ny Alarobia. Ny famoronana toerana ofisialy vaovao sy ny fanendrena ny exec indostrialy teo aloha dia hita fa ezaka mivoatra sy mampivoatra ny sehatra lehibe sy lehibe indrindra amin'ny nosy.
Ny Minisiteran'ny Fizahan-tany vaovao natokana ho an'i Sipra dia noforonina hisolo ny Sampan-draharahan'ny Fizahan-tany any Sipra (CTO), fikambanana 50 taona, izay nanara-maso ny sehatry ny fizahantany hatramin'izao.
Nisy ny fisalasalana fa ny minisitera vaovao dia hahomby kokoa amin'ny fanamorana ny fahefana mpanao lalàna haingana sy malefaka kokoa noho ny an'ny teo alohany, miaraka amin'ny famoahan-dahatsoratra avy any Sipra Mail: "Sarotra kokoa ny mino fa ho haingana kokoa ny minisitera amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. , mampihatra politika ary mamaly haingana ny fiovana eo amin'ny tsenan'ny fizahantany, "miaraka amin'ny fivoahan'ny Financial Mirror eo an-toerana izay nanakoako fa" ny olana amin'ny minisiteran'ny fizahantany vaovao, dia hijaly noho ny teritery mitovy amin'ny sisa amin'ny masinam-panjakana rehetra. , miaraka amin'ny toe-tsaina mpiasam-panjakana izay manakana ny fandrosoana rehetra. ”
Nandritra izany fotoana izany dia nanambara ny filohan'i Sipra Nicos Anastasiades tamin'ny Alarobia fa tsapany fa ny fananganana ny minisitera vaovao dia dingana lehibe iray lehibe ho an'io sehatra io. Nilaza izy fa mino izy fa io no hanokatra ny làlana ho an'ny vanim-potoana maoderina, izay tena ilaina satria mitombo isan-taona ny fizahantany eto amin'ny nosy.
Miankina betsaka amin'ny fizahan-tany i Sipra, ka ny indostria izao dia mitaky 22.3% amin'ny harinkarena faobe ao Sipra, araka ny tatitra farany nataon'ny World Travel and Tourism Council.
Seza fiaramanidina lafo vidy lafo amidy hira: Misy fampiharana ve amin'izany?
Mamono an'i Venise ny fizahan-tany ary miady ny tanàna